एउटै स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ गर्भवती (भिडियो सहित) – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २१, २०७८ समय: १६:३८:४९
कुनै कुने घ ट ना हरु यस्ता हुन्छन् की जुन योजनाबद्ध थियो वा संयोगबस भन्ने जि ज्ञा सा नै उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता कुराहरु सहजै बि श्वा स गर्न मुस्किल पर्छ । तर यस्तै भयो अमेरिका स्थित एक स्कुलमा । जुन अमेरिकाको कन्सास राज्यमा रहेको ओक स्ट्रीट स्कुलको कुरा हो । केही समय अगाडीको प्रसङ्ग हो, त्यस स्कुलमा अ ध्या प न गराउने ७ जना शिक्षिकाहरु एकसाथ ग र्भव ती भए ।
यो यो ज न ब द्ध तरिकाले नभई मात्र संयोग भएको क्याटी नाम गरेकी शि क्षि bकाले बताएकी छिन् । ग र्भ व ती हुने शिक्षिका एक जना एक सन्तानको आमा समेत बनिसकेकी छिन् । उनी आफुसंगै कार्यरत रहेका अन्य शिक्षिकाहरु पनि एकसाथ गर्भ व ती भएपछि निकै उbत् सा हि त भएको बताउँछिन् । स्कुलका ७ शिक्षिका ए क सा थ ग र्भ व ती भएपछि अमेरिकामा यो खब र लाई जो क्सको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा इ न्जो इ गरिरहेका छन् ।
सो स्कुलमा १४ शिक्षिका रहेकामा आ धा र ले मा तृ त्व अ वकास लिएका छन् भने बाँकी रहेका ७ जना पनि एकसाथ गर्भवती भएपछि यसले निकै रो च क ता का साथ हेरिएको हो । यस्तो कसरी स म्भ वत भयो ? के यो योजनाबद्ध तरिकाले भएको थियो ? यस्तै सोचिन्छ तर शिक्षिकाहरु अनुसार यो एउटा संयोग मात्र हो । उनीहरुले अब उक्त स्कुलको पानी कसैले पनि नखाने भन्दैb हाँ सो गरिरहेका छन ।
यता ७ जना शिक्षिकाले पनि मा तृत्व अ व का स लिने भएपछी उनीहरुको स्था न मा अ न्य लाई ल्याउने प्रि न्सि प ल बताउँछिन् । स्कुलकी प्रि न्सि ल एश्ले मिलरका अ नु सा र २० बर्षको करियरमा यस्तो घ ट ना कहिल्यै नदेखेको बताउँछिन् । ७ जना शि क्षि का हरु ए क सा थ ग र्भ व ती भएको कुरा सा र्व ज नि क भएपछि उनी छ क्क परिन् । जसमा एक जना शि क्षि का ले त जु म्याहा ज न्मा उ न लागेको उनको भ नाई छ । बाकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस ।
Last Updated on: May 4th, 2021 at 4:38 pm